हरियो साग खाउँ, नेत्र ज्योति बढाउ, शरीरमा लाग्न सक्ने थुप्रै रोग भगाउँ
अक्टोबर 2, 2019 अक्टोबर 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक	5 Comments शरीर, हरियो साग
मानव स्वास्थ्यमा हरियो सागको महत्व ठूलो छ । हाम्रो दैनिक खानामा हरियो सागसब्जी समाबेस भएको हुनुपर्छ । हरियो सागबाट अनगिन्ती फाइदाहरु हामीले लिन सक्छौं । कोलकत्ताको Neural Eye Cara Center मा केहि दिन आँखा सम्बन्धी अध्ययन गर्न पुगेका थियो त्यहाँ दैनिक आँखाको व्याम गरी सकेपछि हरियो सागपातमा १०,१५ मिनट हेर्ने अभ्यास गराउदो रहेछ ।
यसरी दैनिक हेर्दा आँखामा शितलता प्राप्त हुनुको साथै नेत्र ज्योति बढ्दो रहेछ । हरियो सागमा हेर्ने मात्रले यति फाइदा हुन सक्छ भने खाएर झन कति फाइदा भएको हुन सक्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ‌‌हरियो साग खाउँ नेत्र ज्योति बढाउ शरीरमा लाग्न सक्ने थुप्रै रोग भगाउँ भन्ने नाराका साथ सबैले यसतर्फ ध्यान दिन सकौं भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।
हरियो सागको सेवनबाट हुन सक्ने फाइदाहरू
१. लामो समय कम्प्युटर मोवाइल जस्ता कारणले गर्दा आँखा कमजोर भएको हुन सक्छ यसो भएमा हरियो सागको नियमित सेवनले आँखा कमजोर हुनबाट बचाउनेछ । हरियो सागमा भिटामिन ए का साथै अरू पनि थुप्रै पोषकतत्व हुन्छन् जसले आँखालाई तेजिलो बनाउन सहयोग गर्छ ।
२. हरियो सागमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम भिटामिन डी हुन्छ जुन हड्डीका लागि उपयोगी छ । उमेर बढ्दै गएपछि हड्डीका पनि विभिन्न समस्या देखा पर्दै जान्छन् । त्यसका लागि डाक्टरहरूले क्याल्सियमका औषधि दिन्छन् । नियमित खाने सागमा क्याल्सियम पाइन्छ भने साग खान किन जोड नदिने ? तसर्थ बाल्यकालदेखि नै साग खाने बानी बसाल्नु अति उपयुक्त हुन्छ ।
३. हरियो साग जति स्वास्थ्यका दृष्टिले उपयोगी छ उति नै यसले सुन्दरतामा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ। एन्टीअक्सिडेन्टको गुणले भरिपूर्ण सागले अनुहारलाई ताजा राख्छ ।
४. हरियो सागले क्याल्सियम, फाइबर तथा आइरन प्रदान गर्छ जसले पेटको भित्री सफाइमा मद्दत पुर्‍याउँछ । कोलिन क्यान्सरबाट जोगाउने कैयौं मिनरल्स हरियो सागबाट प्राप्त हुन्छ ।
५.नियमित हरियो साग सब्जी खानेहरूलाई दिसा कब्जीयत हुदैन । पेटको रोगको प्रमुख कारण भनेको दिसा सफा नहुनु पनि एक हो । कब्जीएतका कारणले ठूला मात्र होइन सानामा पनि रोग निम्ताउन सक्छ । हरियो सागमा प्रसस्त भिटामिन हुने हुनाले सागको प्रयोग गरौं ।
← जडिबुटी नखाई छोएको भरमा जस्तोसुकै विष काट्न सफल औषधि
स्वास्थ्य जीवनको लागि कर्कलाको साग खानुका फाइदाहरु →
5 thoughts on “हरियो साग खाउँ, निरोगी बनौं”